रिचार्जपछि बोनस पाउनु भएन ? यसो गर्नुहोस् « TechPana | Digging into Tech
बिहीबार, चैत्र १३, २०७६ १६:५४
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले कम्पनीले अहिले रिचार्जमा उल्लेख्य मात्रामा बोनस दिइरहेका छन् । कोराना भाइरस अर्थात कोभिड १९ का कारण मुलुक नै लकडाउनमा रहेको अवस्थामा सेवालाई सहज बनाउन यस्तो सुविधा ल्याइएको हो ।
त्यसमध्ये नेपाल टेलिकमले रिचार्ज बराबरकै बोनस दिन थालेको छ भने निजी मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेलले रिचार्ज रकमको आधा बोनस दिइरहेको छ ।
तर, बोनस पाएको वा नपाएको विषयमा प्रयोगकर्ता नै दुविधामा परिरहेका हुनसक्छन् । यदि तपाईं नेपाल टेलिकमको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने रिचार्ज गरिसकेपछि आफ्नो नम्बरमा प्राप्त बोनसको बारेमा सहजै थाहा पाउन सक्नुहुनेछ ।
त्यसका लागि *1415*55# डायल गरेर अथवा FR टाइप गरेर १४१५ मा एसएमएस पठाउनुपर्नेछ ।
एण्ड्रोइडमा यसरी प्रयोग गर्नुहोस् आईम्यासेजिङ जस्तै गूगल च्याट
काठमाडौं । एप्पलको सबैभन्दा आकर्षक फिचर भनेको उसको आइम्यासेज सेवा हो । जसले प्रयोगकर्तालाई लोभ्याउँछ
सामाजिक सञ्जालमा जन्म मिति खुलाउँदा हुनसक्छ यस्तो जोखिम, लुकाउने कसरी ?
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा जन्मदिनको शुभकामना पक्कै पनि तपाईंलाई खुशी नै लाग्छ होला । यसैकारण
विण्डोज अपडेटबाट दिक्क हुनुहुन्छ ? यसरी बन्द गर्नुहोस्
काठमाडौं । यदि तपाईंले आफ्नो कम्प्युटर तथा ल्यापटपमा विण्डोज टेन प्रयोग गरिरहनुभएको छ भने बारम्बार
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालले हामी सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर जोडेको छ । तर कहिलेकाँही होशियारी